कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवा निर्वाचित, प्रकाशमान सिंह कति मतले हारे ? — Sanchar Kendra
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवा निर्वाचित, प्रकाशमान सिंह कति मतले हारे ?
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । संसदीय दल निर्वाचन समितिका संयोजक चीनकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार देउवा ४४ मत पाएर निर्वाचित भएका हुन्।
देउवा निकट प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदिप गिरी र डा नारायण खड्का सहित पौडेल र सिटौल समुहले महामन्त्री डा। शशांक कोइरालालाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनाउन लविङ गरेका थिए ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि मतदान भइरहँदा संसदीय दलको बैठक पनि तय भएको छ । बैठक सोमबार दिउँसो २ः३० बजे काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्नेछ ।
बैठकले नयाँ संसदीय दलको नेतालाई बधाइ दिनुका साथै नेताले पदभारसमेत ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा संसदमा प्रतिपक्षीको हैसियतमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे समेत छलफल हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक सोमबारै अपरान्ह ४ बजे बस्दैछ । बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदहरुलाई सूचना समेत जारी गरिएको छ ।